XML Part –2– MYSTERY ZILLION Blog
Posted on June 22, 2010 December 24, 2011 by minlwin
XMLဟာ Tagတွေကိုလွတ်လပ်စွာ　သတ်မှတ်ပြီးအသုံးပြုနိူင်သည့်အတွက်　အချက်အလက်အမျိုးမျိုးကို　ဖော်ပြပေးနိူင်၏။　သို့ပေမယ့်　လွတ်လပ်စွာရေးသားနိူင်ခြင်းကြောင့်လည်း　အဆင်မပြေမှု့များလည်း　တွေ့ရှိနိူင်ပါသည်။　ဥပမာအားဖြင့်　XMLနဲ့ရေးသားထားတဲ့　အချက်အလက်တွေကို　တခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့　အဆက်အသွယ်လုပ်မည်ဆိုတဲ့　နမှုနာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါ။　ကုမ္ပဏီအသီးသီးက　နှစ်သက်သလို　Tagတွေကို　အသုံးပြုနေခဲ့မည်ဆိုလျှင်　အဲ့ဒီXMLစာတွေကိုဘာသာပြန်ဖို့အတွက်လည်း　Programတွေ　လိုအပ်လာပါလိမ့်မည်။　သည်လိုဆိုရင်ဖြင့်　အဆင်မပြေနိူင်ပါ။
XMLစာသားတွေကို　အချက်အလက်အနေနဲ့　အသုံးပြုနိူင်ရန်　အချက်အလက်တွေကို　အသုံးချသူအချင်းချင်း　ဘယ်လိုTagတွေကိုသုံးပြီး　သည်XMLစာသားထဲမှာ　အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြမယ်　ဆိုတဲ့အချက်ကို　ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။　အဲ့ဒီလိုသက်မှတ်ချက်တွေကို　ရေးသားနိူင်တာကတော့　Schema Languageဖြစ်ပြီး၊　DTDဟာ　နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက　အသုံးပြုလာခဲ့တဲ့　Schemaဘာသာရပ်တစ်ခု　ဖြစ်ပါသည်။　Schema ဘာသာရပ်ကိုသုံးပြီး　အချက်အလက်တွေကို　သက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း　ရေးသားထားတဲ့　XMLစာသားတွေကို　ပြီးပြည့်စုံတဲ့XMLလို့ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိ၏။　ဤကဲ့သို့　Schemaဘာသာရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်　အချက်အလက်တွေရဲ့　သက်မှတ်ချက်တွေကိုပုံစံချပေးနိူင်သလို၊　XMLစာသားတစ်ခုလုံးရဲ့　တည်ဆောက်ပုံကို　စနစ်ချနိူင်ပေသည်။　ထို့ကြောင့်　မတူညီတဲ့Applicationတွေကြားမှာလည်း　အချက်အလက်တွေကို　တူညီတဲ့ပုံစံ　အတိုင်း　အသုံးပြုစေနိူင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သည်အခန်းမှာတော့　DTDကိုအသုံးပြုပြီး ပြည့်စုံတဲ့XMLရေးသားပုံကို　ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။　DTD　ဆိုသည်မှာလည်း　လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့　နေရာတွေတော်တော်များများရှိပြီး၊　လေ့လာမှတ်သားရလွယ်ကူပါသဖြင့်　အခြားသော Schemaဘာသာရပ်တွေကို　လေ့လာရာမှာလည်း　အထောက်အကူရရှိစေနိူင်ပါသည်။
DTDဆိုသည်မှာ Document Type Definitionရဲ့အတိုကောက်　အခေါ်အဝေါ်　ဖြစ်ပြီး၊　Schema ဘာသာရပ်　တစ်မျိုးဖြစ်၏။　Schema ဘာသာရပ်ဆိုသည်မှာ　XML Instanceမှာအသုံးပြုမည့်　အချက်အလက်တွေ၊　ပြီးတော့　အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့　အရည်အချင်းတွေကို　သတ်မှတ်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်၏။
အတိအကျဆိုရမည်　ဆိုလျှင်　XMLစာပိုဒ်တစ်ခုလုံးရဲ့　တည်ဆောက်ပုံကို　စနစ်ချရာမှာ　အသုံးပြုသော　ဘာသာရပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။　အောက်ပါစာပိုဒ်ကို　လေ့လာကြည့်ပါမည်။
အထက်ပါ နမှုနာစာပိုဒ်သည်　သစ်သီးနှင့်　သူရဲ့ကုန်စျေးနှုန်းကို　ဖော်ပြပေးပါသည်။ အထူးတထွေဘာမှ　ပြဿနာမရှိဘူးလို့　မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်သည်အတိုင်းဆိုပါက　အောက်မှနမှုနာကဲ့သို့လည်း　ရေးသားနိူင်　ပေလိမ့်မည်။
အထက်ပါနမှုနာမှ ဒုတိယမြောက်သစ်သီးမှာ　ကုန်စျေးနှုန်းသာပါပြီး　အမည်မပါသဖြင့်　ဘာသစ်သီးမှန်း　မသိနိူင်ပေ။　သို့ရာတွင်　သည်XMLရေးပုံရေးနည်းသည်　မှားနေသည်ဟု　မဆိုနိူင်ပေ။　ဤသည်မှာ　ဥပမာတစ်ခု　သာဖြစ်ပေမယ့်　လက်တွေ့တွင်လည်း　လူအမျိုးမျိုးက　XMLတစ်ခုကိုအသုံးပြုကြမည်ဆိုလျှင်　ဤကဲ့သို့　အဆင်မပြေမှု့များသည်　အနည်းနဲ့အများ　ဖြစ်ပေါ်လာနိူင်ခြေရှိပေသည်။
ဤနေရာတွင်　DTDကို　အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်　သည် ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး၊　သည်လည်း　နှင့်၊ ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်း　သတ်မှတ်ချက်ကို　ရေးသားနိူင်သည်။　ထို့အတွက် သစ်သီးကို　ရေးမည်ဆိုလျှင်　အမည်နှင့်　ကုန်စျေးနှုန်းကို　မရေးသား၍မရနိူင်ပေ။
ထိုကြောင့် DTDကို　XMLအချက်အလက်တွေကို　အသုံးပြုသူအချင်းချင်း　ဘယ်လိုTagတွေကို　အသုံးပြုပြီးအချက်အလက်တွေကို　ဖော်ပြမည်ဆိုတာကို　သတ်မှတ်ဖို့အတွက်　ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်　ဟုဆိုလျှင်　မမှားနိူင်ပေ။
XMLစာပိုဒ်တစ်ခုမှာ DTDကို XML Declarationနှင့်၊　XML Instanceရဲ့ကြားမှာရေးသားရမည်　ဖြစ်သည်။　ရေးသားပုံမှာ ဖြင့်　အဆုံးသတ်ရပါလိမ့်မည်။　ထိုအပိုင်းကို　Document Type Declaration လို့လည်းခေါ်ဝေါ်ပါသည်။　သည်အစိတ်အပိုင်းတွင်　XMLစာပိုဒ်ထဲမှာ　အသုံးပြုမည့်　Elementsတွေ၊　Attributesတွေပါရှိပြီး၊　မည်သို့ရေးသားရမည်ဆိုသည်ကို　သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်　XML Instanceရဲ့　ဖွဲ့စည်းပုံကို　စနစ်ချပေးနိူင်ပါသည်။
<!DOCTYPE သတ်မှတ်မည့်Elementအမည် [
(သည်နေရာမှာ သတ်မှတ်ချက်များကို ရေးသားရပါမည်)
သတ်မှတ်မည့် DTD တွင်၊ Element တွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ၊ Attributesတွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ၊ ပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်ဖိုး တွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေ ကိုရေးသားရပါလိမ့်မည်။
အောက်ပါနမှုနာဟာ　ပြည့်စုံတဲ့　XMLနမှုနာ　တစ်ခုဖြစ်ပြီး　စာကြောင်း၃ကြောင်းမြောက်မှ၊　၈ကြောင်းမြောက်အထိဟာ　DTDဖြစ်ပါသည်။Example 1.3.1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></p> <p><!DOCTYPE fruit-list [
<!ELEMENT fruit-list (fruit)>
<!ELEMENT fruit  (name, price)>
<!ELEMENT price  (#PCDATA)>
ရေးသားထားသော　XMLကို　http://www.xmlvalidation.com/ တွင်စစ်ဆေးနိူင်ပါသည်။ ထို့အပြင်　Eclipseကဲ့သို့　IDE တွင်ပါသည်သော　XML Editorများကိုအသုံးပြုပါက　XMLရေးသားပုံများ　မှားယွင်းနေပါက　အမှားများကို　ချက်ချင်း　သိရှိနိူင်ပေသည်။
1. Element ရဲ့သတ်မှတ်ချက်
Elementတွေရဲ့သက်မှတ်ချက်နေရာတွင်　အမည်အတိုင်း　XML Instance မှာအသုံးပြုမည့်　Element တွေရဲ့အကြောင်းကို　သတ်မှတ်ရေးသားရပါမည်။ Example 1 .3.1 တွင်　Elementရဲ့သတ်မှတ်ချက်　၄မျိုးပါဝင်ခဲ့ပေသည်။
<!ELEMENT သတ်မှတ်မည့်Element (Child Element)>
သတ်မှတ်မည့်Elementတွင်　Child Elementတစ်ခုတည်းကိုသာ　အသုံးပြုမည့်အခါတွင်　ဤကဲ့သို့　သတ်မှတ်ရမည်　ဖြစ်မည်။　Example 1 .3.1 ကစာကြောင်းနံပါတ်၄ကို　ကြည့်ပါ။　fruit-list Element တွင်　fruit Child Elementကိုသာ　အသုံးပြုပါမည်ဟု　သတ်မှတ်ချက်ကိုရေးထားပါသည်။　သတ်မှတ်　ထားသည့်　Child Elementအပြင်ကို　အသုံးပြုမည်ဆိုပါက　Valid XMLမဖြစ်တော့ပါသဖြင့်　XML Editor တွင်　Error အဖြစ်　ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
<!ELEMENT သတ်မှတ်မည့်Element (Element1, Element2, ... )>
သတ်မှတ်မည့်Elementတွင်　Child Elementတစ်ခုထက်မက　ရေးသားအသုံးပြုမည့်　အခါတွင်　ဤကဲ့သို့　ကော်မာကိုခံပြီး　အသုံးပြုမည့်　Child Elements တွေကို　သတ်မှတ်ရမည်　ဖြစ်မည်။　Example 1 .3.1 ကစာကြောင်းနံပါတ်၅ကို　ကြည့်ပါ။　fruit Element တွင် nameနဲ့price Element ကိုသာ　အသုံးပြုမည်ဟု　သတ်မှတ်ထားပါသည်။　ထို့အတွက်　fruitကိုရေးသားမည်ဆိုလျှင်　nameကို　ရေးပြီးလျှင် priceကို　အစီအစဉ်အတိုင်း　ရေးသားရမည်ဖြစ်သည်။
<!ELEMENT သတ်မှတ်မည့်Element (Element1 |  Element2 |  ... )>
သတ်မှတ်မည့်Elementတွင်　Child Elementတစ်ခုထက်မက　ရေးသားအသုံးပြုပြီး　Child Elements များထဲမှ　တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကို　အသုံးပြုမည့်အခါတွင်　ဤကဲ့သို့　| ကိုခံပြီး　အသုံးပြုမည့်　Child Elements တွေကို　သတ်မှတ်ရမည်　ဖြစ်မည်။
<!ELEMENT သတ်မှတ်မည့်Element (#PCDATA)>
သတ်မှတ်မည့်Elementတွင် Textအချက်အလက်ကိုသာ　အသုံးပြုမည့်　အခါတွင်　ဤကဲ့သို့　သတ်မှတ်ရေးသားရမည်　ဖြစ်သည်။　ဤသို့ရေးသားထားမည်ဆိုလျှင်　ထိုElement အတွင်းမှာ　အခြားသော　Tagကိုရေးသားလို့　မရနိူင်ပေ။　Example 1 .3.1 ကစာကြောင်းနံပါတ် ၆နှင့် ရသည်　ဤကဲ့သို့　ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရေးသားပုံအသေးစိတ်ကို　အောက်ပါဇယားတွင်　ဖော်ပြထားပါသည်။
A , B A ပြီးလျှင် Bအစီအစဉ်အလိုက်ရေးသားရမည်ဖြစ်သည်။
A & B A နှင့် Bကိုရေးသားရပါမည်။အစီအစဉ်မကျ၍လည်းရေး၍ရပါသည်။
A | B A သို့မဟုတ် Bကိုရေးသားရပါမည်။
A* သုညကြိမ်ထက်မက Aကိုရေးသားနိူင်ပါသည်။
A+ တစ်ကြိမ်ထက်မက Aကိုရေးသားနိူင်ပါသည်။
+A အောက်က Elementများတွင် Aကိုသုညကြိမ်ထက်မကအသုံးပြုနိူင်ပါသည်။
-A အောက်က Elementများတွင် Aကိုအသုံးပြု၍မရနိူင်ပါ။
EMPTY Child Elementကိုမပိုင်ဆိုင်သောElementဖြစ်ပါသည်။
Element မှာအသုံးပြုမည့် Attributesတွေကိုလည်း　သတ်မှတ်ချက်ကို　ရေးသားနိူင်ပါသည်။
<!ATTLIST fruit place CDATA #REQUIRED>
Example 3.2 ရဲ့ fruit Tagတွင် placeဆိုတဲ့ Attributeကို　ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။　ရေးသားပုံ　စနစ်ကတော့　အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
Element Nameနေရာမှာတော့　သတ်မှတ်မည့်Attribute ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့　Elementရဲ့အမည်ကို　ရေးသားပြီး၊　Attribute Nameမှာတော့　သက်မှတ်မည့် Attributeရဲ့အမည်ကို　ရေးသားရမည်　ဖြစ်သည်။　တဖန်သတ်မှတ်မည့် Attributeရဲ့ပုံစံနှင့်၊ Defaultတန်ဖိုးကိုလည်း　သတ်မှတ်ချက်　ရေးသားရမည်ဖြစ်သည်။
Attribute Typeအနေနှင့်　ရေးသားနိူင်သောအချက်အလက်များ　ကိုအောက်ပါဇယားတွင်　ဖော်ပြထားပါသည်။
CDATA Character Dataများကိုအသုံးပြုနိူင်ပါသည်။
(A | B | …) A, B အစရှိသဖြင့်အချက်အလက်များထဲမှတစ်ခုခု။
ID XML Instance ထဲတွင်တစ်ခုထဲသာ တန်ဖိုးအနေနှင့် အသုံးပြုနိူင်မည်ဖြစ်၏။
NMTOKEN အင်္ဂလိပ်စာလုံးများ၊သချင်္ာကိန်းစာလုံးများ၊- _ : ; စာလုံးများဖြင့်သာဖွဲ့စည်းထားသောစကားလုံးကိုသာအသုံးပြုနိူင်မည်ဖြစ်၏။
NMTOKENS NMTOKEN စကားလုံးများကိုအစုအစည်းလိုက်အသုံးပြုနိူင်မည်ဖြစ်၏။
ဘယ်လိုအချက်အလက်မျိုးမဆို　ရေးသားနိူင်ပါသည်။　ထို့ကြောင့်　သတ်မှတ်ချက်ကို　မရေးသားလိုသော　Attributesများမှလွဲ၍　ဤသတ်မှတ်ချက်ကို　အသုံးမပြုသင့်ပေ။
(A | B | …)
ကွင်းစကွင်းပိတ်အတွင်း　| စာလုံးဖြင့်　ခွဲခြားထားသော　အချက်အလက်များထဲမှ　တစ်ခုခုကို　အသုံးပြုနိူင်ပေသည်။　တနည်းဆိုသော်　ထိုအချက်အလက်များအပြင်မှ　အသုံးပြု၍မရနိူင်ပေ။
XML Instanceထဲတွင်　တစ်ခုတည်းသာရှိသော　တန်ဖိုးကိုအသုံးပြုသည့်အခါတွင်　သတ်မှတ်အသုံးပြု　ရပါလိမ့်မည်။　ထို့ကြောင့်XML Instanceထဲတွင်　တန်ဖိုးတူကိုအသုံးပြု၍　မရနိူင်ပေ။　တဖန်IDရဲ့　တန်ဖိုးကို　Alphabet စာလုံး　ဒါမှမဟုတ် Under barဖြင့်စရမည်ဖြစ်ပါသည်။　ထို့အပြင်　နောက်ပိုင်း　တွင်ဆက်လက်　ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သော　Default Valueကိုလည်း #REQUIRED နှင့်#IMPLIED　မှလွဲပြီး　သတ်မှတ်၍မရနိူင်ပေ။
<! ELEMENT country (#PCDATA)>
<!ATTRLIST country id ID #REQUIRED>
<country id="123" />
<country id="B001" />
IDREFသည်　ID Attributeရဲ့　တန်ဖိုးတွေကိုကိုးကားပြီး　အသုံးပြုနိူင်ပါသည်။　IDREFSသည်လည်း　ID Attributesတွေရဲ့　တန်ဖိုးတွေကို　ကိုးကားပြီးအသုံးပြုနိူင်ပါသည်။　IDREFSတွင်IDရဲ့တန်ဖိုးများကို　တစ်ခုနဲ့တစ်ခု one byte spaceစာလုံးဖြင့်ခွဲခြားပြီး　အသုံးပြုနိူင်ပါသည်။
အောက်ပါနမှုနာထဲတွင် reservation ကပိုင်ဆိုင်တဲ့　idရဲ့တန်ဖိုးကို၊　cancelကပိုင်ဆိုင်တဲ့ idကနေ　ကိုးကားပြီးအသုံးပြုနေခြင်း　ဖြစ်ပါသည်။
<! ELEMENT reservation (#PCDATA)>
<!ATTRLIST reservation id ID #REQUIRED>
<! ELEMENT cancel EMPTY>
<!ATTRLIST cancel id IDREFS #REQUIRED>
<reservation id="R0001" />
<reservation id="R0002" />
<reservation id="R0003" />
<cancel id="R0001 R0002" />
NMTOKENဆိုသည်မှာ　Alphabetစာလုံးများ၊　သချင်္ာစာလုံးများ၊　- _ : ;စာလုံးများဖြင့်သာ　ဖွဲ့စည်း ထားသော　စကားလုံးအမျိုးအစား　ဖြစ်ပါသည်။
<! ELEMENT cube (#PCDATA)></p> <p><!ATTRLIST cube height NMTOKEN #REQUIRED></p> <p><!ATTRLIST cube width NMTOKEN #REQUIRED></p> <p><cube height="10" width="20">
NMTOKENSတွင်NMTOKENများကို　တစ်ခုနဲ့တစ်ခု one byte spaceစာလုံးဖြင့်ခွဲခြားပြီး　အသုံးပြုနိူင် ပါသည်။
<! ELEMENT cube (#PCDATA)></p> <p><!ATTRLIST cube size NMTOKENS #REQUIRED></p> <p><cube size="10 20"></p> <p>
Default Valueသတ်မှတ်ချက်သည်　Attributeရဲ့တန်ဖိုးကိုရေးသားဖို့လိုအပ်ခြင်း　မလိုအပ်ခြင်းကို　သတ်မှတ်ချက်ချပေးနိူင်ပါသည်။　အောက်ပါဇယားတွင်　အသေးစိတ်ကို　ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
#FIXED “value” Attributeရဲ့တန်ဖိုးကိုတသမတ်တည်းအသုံးပြုရာတွင်ရေးသားနိူင်ပါသည်။
“Default value” XML Instanceတွင်Attributeကိုမရေးသားထားပါက Attributeရဲ့တန်ဖိုးတွင် “Default value”ကို အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
Attributeရဲ့တန်ဖိုးကို　တသမတ်တည်းသတ်မှတ်ပေးနိူင်၏။　XMLရဲ့Attributeကို　မရေးသားပဲနေမည်　သို့မဟုတ်　သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးအပြင်　အသုံးမပြုစေလိုသောအခါများတွင်　အသုံးပြုနိူင်ပါသည်။
<!ELEMENT it_boost (#PCDATA)>
<!ATTLIST it_boost advance CDATA #FIXED "XML">
<it_boost advance="XML" />
Attributeရဲ့တန်ဖိုးကို မရေးပဲနေချင်သောအခါတွင်　သတ်မှတ်ရပါမည်။
ဤကဲ့သို့သတ်မှတ်ထားမည်ဆိုပါက　XML Instance တွင်Attributeရဲ့တန်ဖိုးကို မရေး၍မဖြစ်ပါ။
<!ATTLIST member nick_name CDATA #REQUIRED>
<member nick_name ="yawana" />
ဤကဲ့သို့သတ်မှတ်ထားမည်ဆိုပါက　XML Instance တွင်Attributeရဲ့တန်ဖိုးကို မရေးသားထားပါက　သတ်မှတ်ထားသော　တန်ဖိုးကိုအလိုအလျှောက်　သတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
<!ELEMENT juice (#PCDATA)>
<!ATTLIST juice price CDATA "120" >
< juice />
< juice price="120"  />
DTDများကို　XMLများထဲတွင်　တိုက်ရိုက်ရေးသားအသုံးပြုနိူင်သလို၊　ပြင်ပတွင်DTD Fileများကိုထား၍　XML　များမှ　ကိုးကား၍လည်း　အသုံးပြုနိူင်ပေသည်။　XMLများထဲတွင်　တိုက်ရိုက်ရေးသားအသုံးပြုသော DTD များကို　Internal Subsetလို့　ခေါ်ဆိုပြီး၊　ပြင်ပ Fileများကို　ကိုးကားအသုံးပြုသော　DTDများကို　External Subsetဟု　ခေါ်ဆိုပါသည်။
အောက်ပါ　နမှုနာသည်　fruit.dtdကို　fruit.xmlမှနေ　ကိုးကားအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
<!ELEMENT fruit (name, price)>
<!DOCTYPE fruit-list SYSTEM “fruit.dtd”>
Entityသတ်မှတ်ချက်များသည်　စာလုံးများကိုအခြားသော　နားလည်လွယ်သည့်　စာလုံးများနှင့်　အစားထိုး　အသုံးပြုရာတွင်　အသုံးပြုကြရပေသည်။　Entityများကို　ပုံမှန်Entity နှင့်　Parameter Entityဟူ၍　ရှိသည်။　ပုံမှန်Entityသည်　XML Instanceတွင်အသုံးပြုပြီး၊　Parameter Entityများကို　DTDများတွင်အသုံးပြုကြ　ပေသည်။
ပုံမှန်Entityမျိုးကို　အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်　XML Instanceအတွင်း　စကားလုံးအရှည်များ　နားလည်　ရခက်ခဲသော　စကားလုံးများအစား၊　လွယ်ကူသော　စကားလုံးများကို　အစားထိုးအသုံးပြုနိူင်ပါသည်။　ပုံမှန်Entityများကိုအသုံးပြုလိုသောအခါ　DTDတွင်　သတ်မှတ်ချက်ကိုရေးသားပြီးမှ　အသုံးပြုနိူင်မည်　ဖြစ်သည်။　ရေးသားပုံမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
<!ENTITY entity-name "value">
<!DOCTYPE fruit-list [
<!ENTITY ap "apple">
&ap;ဟုရေးသားထားသည်ကို　IEဖြင့်ဖွင့်ကြည့်သောအခါ　အောက်ပါအတိုင်း　Appleဟုမြင်ရမည်　ဖြစ်သည်။
1. Parameter Entity
Parameter Entityသည် DTDစာသားများကို　ရေးသားရာတွင်　စကားလုံးများကို　အစားထိုးရေးသား　ဖို့အတွက်　အသုံးပြုကြ၏။　ရေးသားပုံမှာ　အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
<!ENTITY %entity-name "value">
<!--external DTD example-->
<!ENTITY % p "(#PCDATA)">
<!ELEMENT students (student)>
<!ELEMENT student (id,surname,firstname,(subject)*)>
<!ELEMENT id %p;>
<!ELEMENT surname %p;>
<!ELEMENT firstname %p;>
<!ELEMENT dob %p;>
<!ELEMENT subject %p;>
Parameter Entityကိုအသုံးပြုရာတွင်　%entity-name; ဟုရေးသားရပါမည်။
ဤအခန်းတွင်　DTDရဲ့ရေးသားပုံစနစ်အခြေခံကို　လွယ်ကူသောနမှုနာများကိုအသုံးချ၍　တင်ပြထားပါသည်။ Schema Languageကိုအသုံးပြုပြီး XMLစာပိုဒ်များကို　သတ်မှတ်ချက်စနစ်များကို　ရေးသားခြင်းအားဖြင့်　Program များမှအသုံးပြုရလွယ်ကူစေနိူင်သဖြင့်　XMLစာပိုဒ်များအတွက်　Schema Languageတွေရဲ့　အရေးပါပုံကို　သိရှိနိူင်　ပေသည်။　DTDအပြင်ထင်ရှားသော　Schema Languageမှာ　XML Schemaဖြစ်ပြီး　နောက်အခန်းများတွင်　ဖော်ပြသွားပါဦးမည်။
CategoriesBasic, Other Tagsdtd, xml
Previous PostPrevious XML – Part 1
Next PostNext HTML5 Form